Amakhodi Wokukhuthaza we-YouTube TV - Disemba 2020 - Amakhuphoni
I-Youtube TV iyipulatifomu entsha enikeza abasebenzisi ngezinsizakalo ezinhle ze-inthanethi ze-TV. Noma ngubani angasakaza esebenzisa iwebhusayithi yakhe. Kungaba ngcono uma ubenokubhaliselwe ukuqala ukuzijabulisa okungenamkhawulo. Kulo mhlahlandlela, sizokwabelana ngamanye amakhodi ephromo. Lokhu kuzokusiza ukuthi uqale ukusakaza kumadivayisi akho ngokushesha. Sijabulela ukuzijabulisa okuhle okulethwa yi-Youtube TV etafuleni. I-Google yaziwa ngokuphelelisa amasevisi ayo ngaphambi kokuqaliswa. Ukwengezwa kwakamuva ku-ecosystem kunamathuba amaningi.
Seziphelile izinsuku zethelevishini yekhebula. Imidondoshiya ye-Intanethi ilwela ukuletha inguquko ku-TV. Amapulatifomu afana I-Netflix ne-Amazon Prime Video sebephambili impela emncintiswaneni. I-Youtube TV ikulethela ithelevishini ejwayelekile ngekhwalithi engenakulinganiswa.
Mayelana ne-Youtube TV:
Insizakalo ye-Youtube TV yenzelwe izethameli zase-US kuphela. Okwamanje zitholakala ezifundeni ezimbalwa ezikhethiwe. Noma ngubani angayithenga le nsizakalo futhi ayishintshe ngokuphelele indlela asebenzisa ngayo ukuzijabulisa. Baletha ezinye izici zokusakaza ezihlukile etafuleni. Ungazama iwebhusayithi futhi ufunde kabanzi mayelana nensizakalo yabo. Abasebenzisi bathola ukufinyelela kuziteshi ezingama-85 + ze-TV ezibukhoma ngokubhaliselwe okukodwa. I- kokuhlupheka kwe-Cable TV Amaconsi manje ahambile. Ungasika intambo bese ugcine ama- $ 500 / ngonyaka ngale nsizakalo. Kukhona izengezo ezitholakalayo uma udinga usizo oluthile.
Ingabe kukhona okunikezwayo okutholakalayo?
I-YouTube TV njengamanje ayinikeli ngezipho ezithile kubasebenzisi bayo. Kukhona amanye ama-promos asebenzayo phambilini, kodwa amaningi aphelelwe yisikhathi. Ungazama inhlanhla yakho ukuthola ukuthi iziphi ezisebenzayo. Lezi zinsuku izinkampani zobuchwepheshe zizama ukugcina imali yazo ihlolwe. Amakhodi ephromo ayisidingo sabo bonke abasebenzisi abafuna isaphulelo.
Thola i-YouTube Premium Student Discount
Amakhodi Wokukhuthaza we-YouTube TV (2020):
Kunamakhodi ambalwa we-Promo azokusiza ukuphuma. Iphelele kubasebenzisi abafuna ukunciphisa izindleko zabo. Siyazi ukuthi ukuba nezinsizakalo eziningi zokusakaza kungabiza impela. I-YouTube izama ukwehlisa izindleko zakho ngokunikela ngengxenyekazi eyodwa. Nayi iminikelo okwamanje esebenza kungxenyekazi entsha. Sebenzisa lokhu bese ulondoloze ukuthenga kwakho.
Ikhuphoni likusiza ukuthi uthole isaphulelo esingu-55% ekuthengeni kwakho. Isebenza ngokubhaliselwe futhi isebenza ngo-2020.Kuzokusiza ukuthi unciphise inani osetshenziselwe ukuthenga. Iphromo ayisasebenzi, noma kunjalo. Abasebenzisi bangasebenzisa le khodi futhi banciphise ukusebenzisa kwabo imali.
Ukunikezwa kwe-Chromecast -
Ukunikezwa kwe-Chromecast kuyatholakala njengamanje kubo bonke ababhalisile be-Youtube TV. Noma ngubani angajabulela insizakalo yakhe ye-premium ngaphandle kwezinkinga nhlobo.Uhlelo luhlanganisa idivayisi ye-Chromecast ukuze kube lula ukusakaza. Uhlelo lokubambisana luphelele kubasebenzisi abafuna isisombululo esiphelele sokuzijabulisa.
I-Chromecast ibiza u- $ 49.99, kepha ungayithola mahhala ngohlelo lwe-YouTube TV premium. Kuyisivumelwano esifanele sabasebenzisi abaqala njengabasebenzisi bensizakalo. Lokhu kunikezwa kutholakala ngesikhathi esilinganiselwe kuphela, futhi sicela usheshe ngokuthenga kwakho.
Unikelo we-DVR ongenamkhawulo -
I-Youtube TV iphinde inikeze abasebenzisi ikhono lokuthola izinsizakalo ezingenamkhawulo ze-DVR ngenani eliphansi. Azikho izindleko ezingeziwe kusici sokurekhoda. Abasebenzisi bangathola ukufinyelela kumaseshini okusakazwa kokuqukethwe kwe-premium ngale nkundla. Abaningi bethu baphuthelwa yimibukiso esiyithandayo ngenxa yomsebenzi ovela esikweni lasekhaya.
Uma ufuna ukugcina ukusebenza kwakho bukhoma nawe, khona-ke insizakalo ye-DVR iyadingeka. Okubhaliselwe okujwayelekile kwe-Cable TV kuzokukhokhisa amanani aphezulu walesi sici. I-Youtube TV iyinikela mahhala kuwo wonke amakhasimende ayo.
Izici ze-Youtube TV:
Amathani wezici eza ne-Youtube TV. Abasebenzisi bangasebenzisa le nkundla ukujabulela ukuzijabulisa okumnandi. Nazi ezinye zezici ze-premium esizithole zisiza ngensizakalo ye-Youtube TV online.
1. Ayikho inkontileka yonyaka
Izinkontileka zonyaka ziyinkinga enkulu kubaningi bethu. Asifuni ukuzibophezela kunoma iyiphi insizakalo ekhokhelwayo kulezi zinsuku. Izimo zingaqiniseki ngobuningi babasebenzisi.
I-TV ejwayelekile yekhebula izama ukukubopha ngezivumelwano zesikhathi eside. Abasebenzisi be-Youtube TV bakhululekile ukunqamula ukubhaliswa kwabo noma kunini. Sincoma ukuthi usebenzise le nkundla bese wabelana ngemininingwane. Kuyinto yokuthenga okuhle kakhulu ngokuqhathanisa nezinye izinketho ezitholakala emakethe.
2. Ukwabelana okulula
I-Youtube TV inika amandla abasebenzisi ukuthi babelane ngama-akhawunti abo nomndeni kalula. Ipulatifomu iyabiwa ngamadivayisi ahlukene ayisithupha ngasikhathi sinye. Iwebhusayithi iphinde inikeze ukusakazwa okuqhubekayo namawebhusayithi angafika kwangu-3 ngasikhathi sinye.
Uyakujabulela ukubuka okuqukethwe lapho kusebenza nabangane nomndeni. Ipulatifomu iqinisekisa ukuthi abasebenzisi bathola insizakalo ye-premium.
3. Ukwesekwa kwedivayisi
Ipulatifomu ye-Youtube TV isekela wonke amadivayisi amangalisayo angaqhuba izinsizakalo zokusakaza. Sincoma ukuthi usebenzise lokhu ukuqala ukusebenza ngokuqukethwe kwakho ngokushesha.
Ingxenyekazi ye-YouTube TV inezinhlelo zokusebenza zama-Smartphones, ama-TV ahlakaniphile, neziduduzi zemidlalo. Uhlu lwe amadivayisi ahambisanayo likhulu kakhulu, njengoba iGoogle izama ukwenza indawo itholakale kalula.
Lezi ngezinye zezici ze-premium i-Youtube TV enikezela ngazo manje kubo bonke abasebenzisi bayo.
Izindleko zanoma iyiphi insizakalo zibalulekile ukuze zisebenze kubasebenzisi bayo. Siyethemba ukuqinisekisa ukuthi uyazi yonke imininingwane. Iphelele kumakhasimende afuna ukuthenga izinhlelo zawo. Awekho amaphakheji adidayo atholakala kuwebhusayithi. Le sevisi inikeza insizakalo eyodwa eyenele kuzo zonke izidingo zakho. Izindleko eziphelele zale nsizakalo zingama- $ 64.99 / mo.
Thenga manje kusuka ku- I-Youtube TV esemthethweni Iwebhusayithi.
Uyisebenzisa Kanjani ikhodi ye-YouTube TV Promo?
Inqubo yokusebenzisa amakhodi ephromo kuwebhusayithi ilula. Ungalandela izinyathelo ezingezansi ezinikezwe.
Abasebenzisi bangaqala nge uvakashele i-Youtube TV ipulatifomu. Isixhumanisi sewebhusayithiKuzokusa ekhasini lasekhaya lesithangami. Lapha uzobona inketho yesivivinyo samahhala. Ungachofoza kulokhu ukuqala inqubo yakho yokubhalisa.
Abasebenzisi bangangena ngemvume basebenzisa ama-akhawunti wabo we-Google kungxenyekazi. Kuyisidingo ukuthenga ukuthenga. Udinga ukuba nale akhawunti; ngaphandle kwalokho, ipulatifomu ayisebenziseki.Abasebenzisi abasha kufanele bafake i-Zip Zip yase-USA. Kuyisidingo njengoba ipulatifomu okwamanje itholakala kuphela e-USA.
Abasebenzisi kufanele bathole uhlelo olulungele izidingo zabo. Ngaphandle kwenketho yamanani wohlelo, uzothola inketho yekhodi yephromo. Sebenzisa ikhodi, ekunikeza isaphulelo esiphezulu.
Isinyathelo sokugcina ukufaka imininingwane yakho yokukhokha. Kuzoqala ukubhalisa kwakho futhi kukunikeze umfutho obalulekile.Abasebenzisi bangakhokha ngokusebenzisa izindlela eziningi kuwebhusayithi. Lapho ukukhokha sekuqalile ukusebenza, abasebenzisi bangaqala ukujabulela izinsizakalo zabo ze-premium.
Kuyamangalisa! Manje usungathola insizakalo ye-Youtube TV ngesaphulelo esiphezulu.
Amakhodi wokukhangisa we-YouTube TV angaba yinselele ukuthola ku-inthanethi. Kulo mhlahlandlela, siphendula konke ukungabaza kwakho ngokufana. Qala ukusebenzisa insiza namuhla futhi ujabulele ukusakazwa kwe-premium.
download mjikjelwa mp3 free
i-id yombiko we-youtube ukulungisa inkinga
ungawathola kanjani ama-akhawunti wamahhala we-roblox
dela imidlalo engavinjelwe 66
Ngingakwazi ukukhansela insizakalo ngemuva kwezinsuku ezingama-30 zomzila wamahhala
lapho ongabuka khona ama-movie esiNgisi online
thenga futhi ubuke ama-movie online